လွယ်ကူသောဆန် Pilaf - ချက်ပြုတ်နည်းများ
မုန့်ဒိန်ခဲနှင့်ဖွဲ့ chip ကိုသို့ကျဆင်းလာ
စပါး Pilaf သင့်ရဲ့ချက်ပြုတ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ရည်ကိုင်ရည်အတွက်ရှိသည်ဖို့အံ့သြဖွယ်ပန်းကန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဆန်နှင့်ဟင်းရည်တွင်ချက်ပြုတ်ထားသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များပါ ၀ င်သည့်အရသာရှိသည့်ဘေးတစ်ပန်းကန်စာရွက်ဖြစ်သည်။ မှပြီးပြည့်စုံသောဘေးထွက်ပန်းကန် ဝက်သားတင်ဒါ !
ဆန်အမြောက်အမြားပြုလုပ်ရန်နည်းလမ်းပေါင်းရာချီရှိကောင်းရှိနိုင်သည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်ကမ္ဘာအနှံ့အပြားနှစ်သက်သောပန်းကန်တစ်ခုဖြစ်ပြီးလူမျိုးစုအမျိုးမျိုးရှိသည်။ ဒါဟာကျိန်းသေထံမှခြေလှမ်းတက်ပါတယ် ဆန်ဖြူ !
Rice Pilaf ဆိုတာဘာလဲ
ဆန်စပါး Pilaf တွင်ထမင်းချက်ထားသောဆန်နှင့်ပြုလုပ်ထားသည် ကြက်သားဟင်းရည် စပျစ်ဝိုင်သို့မဟုတ်ရေကဲ့သို့သောအခြားအရည်တစ်မျိုး။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်မကြာခဏအသားများကိုထမင်းချက်သည့်အခါအိုးထဲတွင်ထည့်ထားသည်။ များသောအားဖြင့်၎င်းကိုမီးဖိုထိပ်ပေါ်ရှိနောက်ဟင်းတစ်ခွက်၌ပြင်ဆင်သော်လည်း၊ ထမင်းထုပ်ကိုထုပ်ပြီးထုပ်ထားသောအဖုံးထဲသို့ထည့်။ မီးဖို၌ဖုတ်နိုင်သည်။
ဒီစာရွက်လိုတယ် ဘစ်စမာဆန် ၎င်းသည်လက်တွေ့အားဖြင့်အရသာမရှိသော၊ မွှေးသောအရသာရှိသောဆန်ဖြစ်သည်။ သင်သည်ဤစာရွက်တွင်ရှည်လျားသောဘောဇဉ်ဖြူကိုသုံးနိုင်သည် (အရည်ပမာဏကိုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်နိုင်သည်) ။
ဆန်ကိုဆေးပါ။ ဆန်ဖြူရှည်ဆန်ကိုအသုံးပြုသည်ဆိုပါက၎င်းတွင်ဖယ်ရှားပစ်သင့်သောဓာတ်ကူပစ္စည်းတစ်ခုရှိသည်ကိုသတိပြုပါ။ ရေသည်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမစီးမချင်းကောင်းစွာစီးဆင်းသည်အထိရေအေးတွင်ထပ်ခါတလဲလဲဆေးကြောပါ။ Basmati ကိုကောင်းစွာဆေးကြောသန့်စင်သင့်သော်လည်းပုံမှန်ဆန်ဖြူကဲ့သို့နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ဆေးကြောရန်မလိုအပ်ပါ။
ဆန်ဖြန့်ချိ ဆန် pilaf အတွက်, သင်အတူတကွကပ်မ fluffy ဆန်အစေ့ချင်တယ်။ ဆီ၌ဆန်ကိုသိုမှီးထားခြင်းက၎င်းကိုကပ်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။
ဆန်စာအများစုအတွက်တောင်းဆိုထားတာထက်ရေနည်းနည်းသုံးပါလိမ့်မယ်။ များသောအားဖြင့်အိတ်၏နောက်ကျောတွင်ချက်ပြုတ်နည်းများသည်ဆန်တစ်ပိုင်းကိုရေနှစ်ပိုင်းပါရန်အကြံပြုသည်။ pilaf အတွက်မူသင်ဟာဆန်ခွက်တိုင်းအတွက်အရည်နည်းသင့်တယ်၊ သင်၏ချက်ပြုတ်သည့်အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ အနည်းငယ်ကွဲပြားနိုင်သည်။ ထမင်းတစ်ခွက်ယူပြီးလျှင်ဆန်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်တစ်ချက်သာပေးပါ။ နိမ့်ကျအပူပေါ်ဖုံးလွှမ်းကွတ်။
ဤတွင်လွယ်ကူသောဆန် pilaf လုပ်နည်း:
ဆေးကြောပြီးညှစ်ထားသောဆန်ကိုထည့်ပြီးရွှေ (သို့) အရောင်ပြောင်းလာသည့်အထိမွှေပေးပါ။
အရည်နှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုပေါင်းထည့်ပါ၊ ဆန်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်လှန်ပေးပါ။ ပြီးလျှင်အရည်အားလုံးကိုစုပ်ယူသည်အထိဖုံးအုပ်ထားပါ
အသုံးပြုလျှင်ဗာဒံသီးနှင့် parsley နှင့်ထိပ်ဖျားနှင့်အတူပျံ။
ရေခဲသေတ္တာ ဆန် pilaf ကိုမီးဖိုမှပူ။ လတ်ဆတ်စွာစားသုံးသော်လည်းရေခဲသေတ္တာတွင် ၂-၃ ရက်ထားလေ့ရှိသည်။
ရေခဲသေတ္တာ အေးခဲ။ အေးပါကသေချာပါစေ။ ၎င်းကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် ၂-၃ လထားသင့်ပြီး၎င်းကိုမိုက်ကရိုဝေ့ (ဖ်) တွင်အကောင်းဆုံးအပူပေးသင့်သည် (ငါအပူပေးသည့်အခါလက်ဖက်ရည်ဇွန်းရေအနည်းငယ်ထည့်ပါ) ။
ဤနေရာတွင်အခြေခံဆန်စပါးနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုသင်သိသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဗားရှင်းများကိုဖန်တီးပါ။ ပဲ, စပျစ်သီးပျဉ်, နံ့သာမျိုးနှင့်ရာသီထည့်ပါ။ ဆန်သို့မဟုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်ကစားပါ။ ဆန် pilaf သည်သင့်မိသားစု၏အရသာနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေနိုင်သောစွယ်စုံစားပွဲဖြစ်သည်!
မက္ကဆီကန်ဆန် - taco ညအဘို့အပြီးပြည့်စုံသော
ကြက်သားထမင်း - စူပါကျန်းမာရေး
ကြက်သွန်ဖြူထောပတ်ဆန် - ငါ့သမီးရဲ့အကြိုက်ဆုံး
မှိုမုယောစပါး Risotto - လွယ်ကူပေမယ့်ဖန်စီ!
စပိန်ဆန် - အရသာခြမ်း
ညစ်ပတ်ဆန် - တောင်ပိုင်းဂန္
ပြင်ဆင်ချိန်၁၀ မိနစ်များ ချက်ပြုတ်ချိန်၃၅ မိနစ်များ စုစုပေါင်းအချိန်လေး မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၄ စားသုံးခြင်း စာရေးသူHolly Nilsson Rice Pilaf သည်သင်၏ချက်ပြုတ်သည့် repertoire ၌ရှိသည်သောအံ့သြဖွယ်ပန်းကန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အရသာရှိသောတစ်အိုးတည်းသောမုန့်ညက်ဖြစ်စေသည်၊ သို့မဟုတ်၎င်းကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်း ထား၍ ဘေးချင်းဟင်းအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢⅓ ခွက် ကြက်သွန်နီ ထုထည်
▢နှစ် ဇွန်း ထောပတ်
▢¾ ခွက် ဘစ်စမာဆန်
▢နှစ် ဇွန်း မုန်လာဥနီ ဖျက်စီး
▢နှစ် ဇွန်း ငရုတ်ပွအနီ minced
▢14 ½ အောင်စ ကြက်သားဟင်းရည်
▢¼ ခွက် ဝိုင်ဖြူ သို့မဟုတ်ရေ
▢နှစ် ဇွန်း ပျားရည်ဆိတ်နေတယ် သွားတာပါ
▢၁ ဇွန်း ကြက်သွန်အစိမ်း သို့မဟုတ် parsley
ကြက်သွန်၊ ထောပတ်နှင့်ကြက်သွန်ဖြူများကိုအလယ်အလတ်အရွက်ဖြင့်ပေါင်းစပ်ပါ။ ပျော့ပျောင်းစေရန်အလတ်စားအပူကျော်ချက်ပြုတ်ပါ ၃ မိနစ်ခန့်။
ဆန်ကိုထည့်ပြီး ၇-၁၀ မိနစ်ခန့်ကြာသည်အထိအရသာရှိသည့်အနံ့ထွက်လာပြီးရွှေရောင်ဖြစ်လာသည်အထိချက်ပြုတ်ပါ။
ကျန်သောပါဝင်ပစ္စည်းများကိုအစိမ်းရောင်ကြက်သွန်နီနှင့်ဗာဒံသီးမှလွဲပါ။ ဆူအောင်တည်ပါ၊ ၁၅ မိနစ်မှ ၂၀ မိနစ်သို့မဟုတ်အရည်စုပ်ယူသည်အထိအပူကိုနိမ့်အောင်မျှဝေပါ။
အပူထဲကနေဖယ်ရှားလိုက်ပါနှင့်5မိနစ်ဖုံးလွှမ်းထိုင်ရန်ခွင့်ပြုပါ။
ဗာဒံသီးနှင့် parsley နှင့်အတူတစ်ခက်ရင်းခွနှင့်အပါအနှင့်အတူ fluff ။
ကယ်လိုရီ2. 3. 4,Carbohydrates:၃၂ဆ,ပရိုတိန်း:၄ဆ,အဆီ:၈ဆ,ပြည့်နှက်နေသောအဆီ၃ဆ,ကိုလက်စထရော:ဆယ့်ငါးမီလီဂရမ်,ဆိုဒီယမ်:434မီလီဂရမ်,ပိုတက်စီယမ်221မီလီဂရမ်,ဖိုင်ဘာ:၁ဆ,သကြား:၁ဆ,ဗီတာမင်အေ:1590IU,ဗီတာမင်စီ:၁၅.၁မီလီဂရမ်,ကယ်လစီယမ်၃၂မီလီဂရမ်,သံ:၀.၇မီလီဂရမ်
သော့ချက်စာလုံးဆန် pilaf သင်တန်းအရံဟင်း ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုကော်ပီကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝပိတ်ပင်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။